Ithuba lokuba ingxenye yentuthuko – Msunduzi News
Yazi ifagugu lakho
Ithuba lokuba ingxenye yentuthuko
NGOKWEMITHETHO yezwe kanye naleyo esingethe ukusebenza kukaHulumeni wendawo, ukuba yingxenye yomphakathi ezinhlelweni zikaHulumeni akusona isihe kepha yilungelo. Lokhu kufakazelwa yizinhlelo uHulumeni kuwo wonke amazinga aqhamuka nazo neziqinisekisa ukuthi nembala umphakathi uba yingxenye yokwenziwa nokweluswa kwemithetho kanjalo nentuthuko yawo. Lapha kuHulumeni wasekhaya uHlelo Lwentuthuko Edidiyelwe ebizwa nge- IDP, lubeka inkundla lapho umphakathi uba yingxenye. I-IDP iyona ehlonza ukuthi isabelomali njengohlelo oluyiqhingasu lokuthuthukisa uMasipala, luhlinzeke indlela umphakathi nezinhlangano ukuba bangakucabangela kanjani ukuletha izinsizakalo ezivela kuMasipala eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu elandelayo.
Ngokulandela iMunicipal Systems Act iSahluko 5 neMunicipal Finance Management Act iSahluko 4, uMkhandlu usukhiphe isaziso sezimbizo nayilapho kuzokwethulwa khona izinhlelo zentuthuko. Lokhu kulandela umhlangano woMkhandlu obe mhla zingama-28 kuNhlolanja nonyaka nayilapho kwethulwe khona imiquliu embili okuyiDraft Integrated Development Plan (IDP) neMedium Revenue & Expenditure Framework.
Ngokwesimemezelo soMkhandlu izimbizo nezizokwandulelwa wumhlangano wokucobelelana ngolwazi lwamaKomiti Amawadi, luzoqala ngomhla zingama-23 kuNdasa luphele mhla zingama-31 kuye uNdasa. Ukuthola kabanzi ngoHlelo Lwentuthuko Oludidiyelwe eMsunduzi, leli phephandaba lixoxisane noMnu uSiwelile Zimu oyiMeneja yoPhiko olubhekelele Intuthuko Edidiyelwe.
Echaza lolu hlelo uZimu ukugcizelele ukuthi okusuke kwethulwa ezimbizweni kusuke kungeyona into esuka ezisebenzini kepha kusuke kuyizinto okusuke kukhulunywe ngazo kusuka esigabeni somphakathi, kumawadi. “Thina siwuPhiko lakwa-IDP sihlangana nomphakathi kanye namakhansela ngokwewadi ngayinye sizwe izidingo zabo bese sizifaka ohlwini lwezidingo okumele zenziwe nguMasipala, nokungasho-ke ukuthi lokho kuzokwenziwa ngesabelomali sonyaka owodwa kepha ziyagcinwa zenziwe uma sekunemali ebhekelele leso sidingo,” kuchaza uZimu.
Khona lapho uveze ukuthi: “Isabelomali sonyaka wezi-2019/20 siyizigidi ezingama-R512. Le mali ihlukana kanje, izigidi ezingama-R380 zizoya eMnyangweni i-Infrasture Services, izigidi ezingama-R64 zizoya kwaSustainable Development, izigidi ezingama-R25 zona ziye kwaCommunity Services, izigidi ezili-R10 ziye eHhovisi likaMeneja Wedolobha, izigidi ezi-R5 ziya kwaCoperate Services, kanti ezingama-R27 ziye kwaFinance.”
Ngokusho kwakhe le mali yiyo ezosetshenziswa emsebenzini ezohlinzekwa emphakathini, ayihlangene nokusebebenza kukaMaspala kwansuku zonke nokuthenga izinsiza kusebenza zabasebenzi. Kulindeleke ukuthi iMeya ichaze kabanzi ngesabelomali ezimbizweni.
Njengezinhlelo zoMkhandlu izimbizo ezahlukene zibe khona kanjalo nabantu bathola ithuba lokuzizwela ngezinhlelo kwathi khona lapho bathola nethuba lokuveza imibono kanjalo nezikhalo zabo ngendawo yabo. Phakathi kwababehambele izimbizo bekukhona iMeya namalungu esigungu, izinhlaka zoBukhosi, izikhulu zikaMasipala kanye namalungu omphakathi. Okuqaphelekile kuzo zonke izethulo yindlela abebemele uMkhandlu abebe ngafi hli ngayo lokho okuyizingqinamba. Umphakathi nawo ubuveza lokho okuyizinkinga zansukuzaphuma. Kukhoa ukuvumelana ekutheni ezalonyaka izimbizo zenzeke ngesikhathi esinzima emnothweni wezwe.
UHulumeni kanjalo nongoti bayavumelana ekutheni elakuleli ngeke likubone ukukhula komnotho njengoba kwabe kuhlonziwe. Lesi simo sibeka omasipala abafana noMsunduzi enkingeni ngoba ukwehla komnotho ezweni kusho nokwehla kwamandla omnotho emalungwini omphakathi. UMsunduzi yize uyinhlokodolobha kepha ezinye izngxenye zawo zisanemiphakathi ehlwempu nengeke ikwazi ukukhokhela zonke izidingo. Kuyimanje uMsunduzi unohlelo olubhekelele leso simo okusho ukususwa kwemali kwezinye izidingo iye kwezinye. Ukwehla kwamandla omnotho kunqinda ngisho omasipala amandla okuhlelela isikhathi eside okuthi noma kunezifi so kepha iqiniso lokuswelakala kwamandla emali liziphonse entalashishi lezo zifi so. Nokho zonke lezi zingqinamba azilemuki ilungelo lomphakathi lokuba yingxenye yokwakhiwa kwemithetho kanjalo nezinhlelo zomkhandlu nokuyinto engesona isihe kepha eyilungelo elivikelekile kuMthethosisekelo.
Kafushane ngohlelo lwentuthuko oludidiyelwe
Ngokwemigomo yeLocal Government Municipal Systems Act, bonke omasipala kudingeka ukuba bazilungiselele futhi basingathe ngokusemthethweni uHlelo Lwentuthuko Oludidiyelwe i-Intrgrated Development Plan (IDP). Ukuhlela intuthuko okudidiyelwe yindlela omasipala abazilungiselela ngayo izinhlaka zamaqhingasu awunyakanhlanu ezibuyekezwa minyaka yonke ngokubonisana nemiphakathi nababamba iqhaza. Inhloso ukuthola izinsizakalo nokuphokophelelwe kwentuthuko ezindaweni zomasipala ngendlela ephusile nesimamisayo. Kufanele i-IDP, phakathi kokunye, ibandakanye:
umbono womkhandlu wentuthuko yesikhathi eside kumasipala
ukuhlolwa kwezinga elikhona lentuthuko ekulo kumasipala nokuhlonzwa kwemiphakathi engakwazi ukuthola izinsizakalo ezinqala zikamasipala
izinhloso nokuseqhulwini okuyintuthuko yomkhandlu kubandakanya izinhloso zokuthuthukisa umnotho wendawo kanye nezidingo zezinguquko zangaphakathi
amaqhingasu entuthuko omkhandlu okufanele ahambisane nezidingo zokuhlela zikazwelonke noma zesifundazwe
uhlaka lwentuthuko ngokobundawo
amaqhingasu okusebenza omkhandlu
izinhlelo ezisebenzayo ezilawula izinhlekelele
uhlelo lwezezimali nesabelomali esibhekela iminyaka emithathu ezayo
izinkomba nokuqondiwe kokusebenza okusemqoka.
Kuhlomule nezingane ngolukaMandela
AmaKomiti: Inhliziyo eyelusa intuthuko
Previous post: ‘Sonke sinelungelo lendawo ehlanzekile’
Next post: Uthole elinye iqhawe uMgungundlovu kuMovers FC
Injabulo kunqoba abase-Ethiopia kuMandela Marathon
ImaritzburgUnited ilangazelele ukuqeda kuTop 8
Iligi kanobhutshuzwayo ivumbulula ikhono eWillowfontein
OwaseNamibia udle ubhedu kuSPAR 10km